Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများ- La Puntilla မှ La Calita | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 29/04/2022 12:00 | Espana, ကမ်းခြေ
အ Puerto de Santa Maria ၏ကမ်းခြေများ သူတို့ဟာ စပိန်မှာ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေပါ။ မြတ်စွာဘုရား၌ မပါဝင်ကြကုန် Cadiz ပင်လယ်အော် San Fernando ရဲ့ဘေးမှာ နယ်စပ်၏ Chiclana သို့မဟုတ် တော်ဝင်ဆိပ်ကမ်း။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရေများဖြင့် ရွှေစင်ကောင်းများရှိသည်။
စုစုပေါင်း၊ ရေချိုးသည့်ကမ်းခြေ ၁၆ ကီလိုမီတာရှိသည်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ ၎င်းသည် သင့်အား သက်တောင့်သက်သာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ပေးဆောင်သည်။ ဤအရာအားလုံးကို ပေါင်းထည့်လိုက်လျှင် ထိုဒေသ၏ ရာသီဥတုသည် အမြဲတမ်း သာယာနေပေလိမ့်မည်။ နေနာရီများစွာPuerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများကိုခံစားရန် သင့်တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးရှိသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးကို သင်ရွေးချယ်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို သင်နှင့်အတူ ဖြတ်သန်းသွားပါမည်။
1 Puntilla ကမ်းခြေ
2 El Aculadero ကမ်းခြေ
3 Puerto de Santa María ရှိ ကမ်းခြေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Santa Catalina သည် လှိုင်းစီးရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
4 Levante သဲသောင်ပြင်
5 Fuentebravia ကမ်းခြေ
6 Valdelagrana ကမ်းခြေ
7 Wall နှင့် La Cove
8 Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများကိုခံစားရန်အချိန်ကောင်းလား။
9 Puerto de Santa María တွင် ဘာမြင်ရမည်နည်း။
Puntilla ကမ်းခြေမှ ရေညှိ
ပါးစပ်ဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ဂွာတီတီမြစ် နှင့် Colora ကမ်းခြေအရှည်မှာ မီတာကိုးရာနီးပါးရှိပြီး ပျမ်းမျှအကျယ်မှာ ကိုးဆယ်ခန့်ရှိသည်။ မြို့နဲ့နီးလို့ အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နီးပါတယ်။ San Antón ၏ ထင်းရှူးတောများနှင့် သဲခုံများစခန်းချတဲ့နေရာကို တွေ့လိမ့်မယ်။
ထို့အပြင် မြို့ပြကမ်းခြေ၏ စရိုက်လက္ခဏာမှာ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး ရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စနေ၊ ၎င်းသည် သင့်အား အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်း၊ အားကစားနေရာများနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာအစုံပါရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အသုံးပြုခွင့်နှင့် ရေချိုးရန် အထူးထိုင်ခုံများပင် ပြုလုပ်ထားသည်။
El Aculadero ကမ်းခြေ
Colorá ဟုလည်းလူသိများသောကြောင့်၎င်းသည်ယခင်တစ်ခု၏ဘေးတွင်အတိအကျဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စပ်ကြားဖြစ်၏။ ဇာ y ဆိပ်ကမ်း ရှယ်ရီPuerto de Santa María ၏ လှပသော အားကစားနှင့် ခရီးသွားလှေဆိပ်။ Avenida de la Libertad မှတဆင့် ဤသဲသောင်ပြင်နေရာကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
အလျား မီတာ ရှစ်ရာနီးပါး ရှိပြီး ပျမ်းမျှ အနံ တစ်ဆယ့်လေးပေ ရှိသည်။ ထို့အတူ၊ ၎င်းသည် သင့်အား သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ရေချိုးပေးခြင်းအားလုံးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လည်း စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန site ကို Archaic အောက်ပိုင်း Paleolithic အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ အပိုင်းတွေကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ အဲဒီထဲမှာ တွေ့လိမ့်မယ်။ မြူနီစီပယ်ပြတိုက် Puerto de Santa Maria မှ
Santa Catalina, Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခု လေလှိုင်းစီး
Santa Catalina ကမ်းခြေ
၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့် Levante နှင့် Valdelagrana တို့နှင့်အတူ၊ ဤ Andalusian မြို့၏အကြီးဆုံးကမ်းခြေဖြစ်သည်။ အနံ မီတာ သုံးထောင့်တစ်ရာ ရှည်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် သေးငယ်သော သဲသောင်များစွာလည်း ပါဝင်သည်။ အတိအကျ Vistahermosa၊ Red Crab၊ El Buzo၊ El Ancla နှင့် Las Redes တို့ဖြစ်သည်။.
၎င်းတွင် သင်လိုအပ်နိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးကို ပါရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် လှေများ၊ ကင်းမျှော်စင်များ၊ ရှေးဦးသူနာပြုကိရိယာများ၊ အိမ်သာများနှင့် ရေချိုးခန်းများပါရှိသည့် အသက်ကယ်စောင့်များ ပါဝင်သည်။ ကမ်းခြေသည် ကော်ပတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး Rota လမ်းနှင့် ဧရိယာအတွင်းရှိ မြို့ပြများထံမှ သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
စူးစမ်းလိုစိတ်အနေဖြင့်၊ ၎င်း၏ရေများသည် Cádiz ပင်လယ်အော်၏ကျန်ကမ်းခြေများထက် အနည်းငယ်အေးသည်ဟု သင့်အား ပြောပြပါမည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ သင်​ကြိုက်​ရင်​ အားလုံးထက်​ လေလှိုင်းစီး သို့မဟုတ် စွန်ဖြင့်လှိုင်းစီးခြင်းSanta Catalina သည် ၎င်း၏ရာသီဥတုနှင့် ၎င်း၏လှိုင်းများကြောင့် လေ့ကျင့်ရန် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများထဲတွင်၎င်းသည်ကိုယ်စားပြုသည်။ သဘာဝ ကြွယ်ဝမှုBahía de Cádiz ပန်းခြံ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသောကြောင့်၊ အမှန်တော့၊ ၎င်းသည် San Pedro မြစ်၏ ပါးစပ်ရှိ စိမ့်မြေဧရိယာများကို အခြားသော သဲခုံများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အလျားစတုရန်းမီတာ လေးထောင်ခန့် ရှိပြီး ပျမ်းမျှ အကျယ် တစ်ရာနီးပါး ရှိသည့် သေးငယ်သော သဘာဝ နယ်မြေတစ်ခု ရှိသည်။ ရေလွှာလျှောစီးခြင်းကဲ့သို့သော ရေကစားနည်းများကို လေ့ကျင့်ရန်လည်း သင့်တော်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ သဘာဝပန်းခြံတစ်ခုတွင် သင်လမ်းလျှောက်ရန် သို့မဟုတ် စက်ဘီးစီးရန် လိုအပ်သည် (၎င်းတို့ကို ရပ်နားရန်နေရာရှိသည်)။
ဒီလိုပဲ ကမ်းခြေကနေ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ တောင်တက်လမ်းကြောင်း Jerez မှ Trocadero သို့ Andalusia တွင်ပထမဆုံးသောမီးရထားလိုင်းဟောင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူသောလမ်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အများအပြား ထိုဒေသရှိ သမိုင်းဝင်နေရာများကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်း။. ယင်းတို့အနက် အလယ်ခေတ်ဆားတိုက်များဖြစ်သည်။ Algaidaစစ်တပ်ရှိရာအရပ်၊ နပိုလီယံ လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်း သို့မဟုတ် Andalusian သံမဏိကုမ္ပဏီဟောင်း၏ လိုဏ်ခေါင်းများ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ Levante ကမ်းခြေတွင် ကျန်းမာရေး၊ အသက်ကယ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ရေချိုးပေးခြင်းများလည်း ရှိသည်။ သို့သော် ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကွဲပြားနေသူများအတွက် အိမ်သာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
အရှည် မီတာငါးရာနီးပါး ကျယ်ဝန်းသည်။ ဒါပေမယ့် အနားယူဧရိယာ စတုရန်းမီတာ ငါးထောင်ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် တောင်ကြား၊ တောင်ခြေရင်းတွင် တည်ရှိသည်။ Rota ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်း နှင့်၎င်း၏အမည်ကိုယူသောမြို့ပြဖြစ်လာသည်။
လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကွဲပြားနေသူများအတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။ အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်းများ၊ အသက်ကယ်စောင့်များ၊ စက်ဘီးများ ရပ်နားရန်နေရာနှင့် တစ်ပင်လည်း ပါရှိပါသည်။ ချစ်တယ်. ဤအရာအားလုံးသည် အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စပိန်ပြင်ပမှ ရောက်ရှိလာသူများ နှစ်ဦးစလုံးကို အလွန်တန်ဖိုးထားမှုဖြစ်စေသည်။
Puerto de Santa María ရှိ အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Valdelagrana
ပါးစပ်ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ဂွာတီတီမြစ် နှင့် Levante ကမ်းခြေငါတို့က မင်းကို ပြောထားပြီးသား။ အလျား မီတာ နှစ်ထောင်ခန့်ရှိပြီး အနံ ခုနစ်ဆယ်ခန့်ရှိသည်။ အခွံကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ၎င်းကို ဖြတ်ပြေးသည်။ လမ်းဆုံလမ်းခွ မီတာတစ်ထောင့်ငါးရာနီးပါးရှိသော လမ်းလျှောက်ခြင်းအပြင် ဘားများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များစွာကို သင်ခံစားနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရှိတယ်။ စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းများ ဆားတိုက်ခန်းတွေရဲ့ အံ့မခန်း ရှုခင်းတွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာပါ။ အနားယူရန်သာမက လေ့ကျင့်ရန်လည်း သင့်တော်ပါသည်။ လေလှိုင်းစီး နှင့် စွန်ဖြင့်လှိုင်းစီးခြင်း. ၎င်းသည် သင့်အား Cádiz ၏ ခမ်းနားသောရှုခင်းများကို ခံစားနိုင်စေပါသည်။
အပန်းဖြေဖို့ အတွက် ပုခက်နဲ့ ထီးတွေ ငှားဖို့ သိထားသင့်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကွဲပြားမှုနှင့် အသက်ကယ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စက်ဘီးနင်းလှေများ ငှားရမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ရေချိုးကုလားထိုင်များပါရှိပါသည်။ သင်ကားဖြင့်လာပါက CA-32 လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ခြေလျင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စက်ဘီးဖြင့်လည်းကောင်း Valdelagrana ကမ်းခြေသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
Wall နှင့် La Cove
အပျက်အစီးများသာ ခြားသောကြောင့် ဤကမ်းခြေနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ Santa Catalina ရဲတိုက်၎င်းတို့ကို ထူးခြားသောလေကိုပေးဆောင်ပြီး ကာရေဘီယံ၏သဲသောင်ပြင်များကို သတိရစေမည့် XNUMX ရာစုက ကမ်းရိုးတန်းခံတပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီကမ်းခြေတွေမှာ သင်ရလိမ့်မယ်။ အံ့သြဖွယ် နေဝင်ချိန်များ.
တံတိုင်းကြီးသည် အရှည်ပေသုံးရာ့ငါးဆယ်မျှသာရှိပြီး အကျယ်မှာ မီတာငါးဆယ်မျှသာရှိသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတွင်အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းရှိသည်။ ထို့အတူ ဖြစ်ခြင်းအတွက် ထင်ရှားသည်။ အကာကွယ်ပေးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။ Cadiz ၏ပင်လယ်အော်တစ်ခုလုံး။ Avenida de la Libertad မှတဆင့် သို့မဟုတ် စက်ဘီးလမ်းကြောတစ်လျှောက် စက်ဘီးဖြင့် ၎င်းကို ခြေလျင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကို ကားရပ်ဖို့ နေရာတောင် ရှိတယ်။
၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်၊ La Calita ရဲတိုက်၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီးအရှည်မီတာငါးရာခန့်ရှိပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆယ့်ငါးမီတာကျယ်သည်။ သို့သော် ၎င်းကိုရောက်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဖြတ်လျှောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Puerto de Santa María မှ Rota သို့သွားသောလမ်း. လမ်းမကြီးပေါ်ကို ကွေ့ပတ်သွားရမယ်။ Vistahermosa မြို့ပြအသွင်ဆောင်ခြင်း။ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ပါ။ ယခင်ပုံစံကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် သင့်အား အိမ်သာနှင့် ရေချိုးပေးပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Cádiz ပြည်နယ်၏ဤဧရိယာတွင်အခြားကမ်းခြေတစ်ခုရှိပါသေးသည်။ ၎င်းသည် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး. သို့ရာတွင်၊ ၎င်းကို အထက်ဖော်ပြပါ Rota ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတွင် ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ၎င်းကို သင်ခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများကိုခံစားရန်အချိန်ကောင်းလား။
La Calita ကမ်းခြေ
ဤပင်လယ်အော်၏ဧရိယာ၌ရာသီဥတုဗေဒ Cádiz ညင်သာပျော့ပျောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး ၎င်း၏လှပသောကမ်းခြေများကို သင်ခံစားနိုင်သည်။ အတိအကျပြောရလျှင် ရာသီဥတုသည် အပူပိုင်းဒေသ-မြေထဲပင်လယ်. ဆောင်းရာသီက အရမ်းအေးပြီး နွေရာသီက ပူပေမယ့် အရမ်းပူစရာမလိုပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကတော့ အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာထဲက လေပြင်းတွေကြောင့်ပါ။
သို့သော် အားလုံးထက်၊ ထိုနေရာသည် ၎င်း၏ နေရောင်ခြည်၏ နာရီပေါင်းများစွာအတွက် ထင်ရှားသည်။ တစ်နှစ်ကို သုံးထောင်ကျော်တယ်။. ထို့ကြောင့် မိုးရေချိန် (၄၀၀ မီလီမီတာ) ရှားပါးသည်။ Cádiz ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနယ်မြေကိုမမေ့ပါနှင့် ကော့စတာက de la Luz.
သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သမျှအားလုံးအတွက်၊ နွေဦးနှောင်းပိုင်းနှင့် ဆောင်းဦးရာသီအစနှစ်ခုစလုံးသည် Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများကိုခံစားရန်တရားဝင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ယုတ္တိနည်းအရ လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က နွေရာသီပါ။ ဒီလို ခမ်းနားလှတဲ့ ကမ်းခြေတွေကို မခံစားနိုင်ပေမယ့် ခရီးသွားတွေ ပိုများလာတဲ့အခါ သင်နဲ့ ဆုံစည်းရမယ့်အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Puerto de Santa María တွင် ဘာမြင်ရမည်နည်း။
Castillo de San Marcos၊ Puerto de Santa María ၏ အဓိက အထိမ်းအမှတ်များထဲမှ တစ်ခု
သင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့် အထိမ်းအမှတ်နေရာအချို့ကို ဖြတ်သန်းခြင်းမပြုဘဲ Cadiz ၏ ကမ်းခြေများ၏ ဤခရီးစဉ်ကို မပြီးမြောက်နိုင်ပါ။ Puerto de Santa María တွင် အလွန်ထင်ရှားသော နှစ်ခု။ ခံ့ညားခြင်းဖြစ်၏။ ဆန်မားကို့စ်ရဲတိုက်XNUMX ရာစုတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော အာရပ်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် ခိုင်ခံ့သောဘုရားကျောင်း Major Priory ဘုရားကျောင်းXNUMXth တွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း (XNUMX ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် (ထို့ကြောင့်၎င်း၏မမှားနိုင်သောမိုက်မဲသောဒြပ်စင်များ)။
သို့သော် သင်သည် Cadiz မြို့ရှိ အခြားသော ဘာသာရေးနှင့် အရပ်ဘက် အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ အဲဒီအထဲမှာ ပထမ၊ အောင်ပန်းကျောင်းတိုက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏စည်းဝေးကြီးများနှင့် မသန့်ရှင်းသောသန္ဓေတည်ခြင်း သို့မဟုတ် Santa Clara ၏သင်္ခမ်း။ ပြီးတော့ စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့အမျှ၊ Vizarron အိမ်Araníbar ၏ဘုံဗိမာန်များ၊ Indies to the Chargers နှင့် Álvarez-Cuevas သို့မဟုတ် Old Lonja del Puerto။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးတင်ပြထားပါသည်။ Puerto de Santa Maria ၏ကမ်းခြေများ. ၎င်းတို့အားလုံးသည် ခမ်းနားပြီး ဝန်ဆောင်မှုအများစုရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏အထိမ်းအမှတ်များကိုခံစားရန် Cadiz မြို့သို့သင်၏လည်ပတ်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။ စပိန်နိုင်ငံ၏ အခွင့်ထူးခံနယ်မြေကို သင်မသိချင်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Puerto de Santa María ၏ကမ်းခြေများ